Fumana inkampani ye-iPhone yakho-Fumanisa umqhubi kwaye ukuba isimahla
Kweli phepha unokufumanisa ukuba yintoni inkampani yi-iPhone yakhoOko kukuthi, kuliphi na iqela elidityaniswe nayo ekuqaleni. Ukongeza, unokufumanisa ukuba iyangena ikhontrakthi yekota okanye ukuba sele ikhona I-iPhone yasimahla mveliso okanye ukhululiwe.
Ngale ndlela unokufumanisa ukuba i-iPhone oyithengileyo okanye uceba ukuyithenga iyahlangabezana neemeko oxelelwe ngazo kwaye ukuba ingavulwa yi-IMEI.
1 Fumanisa inkampani ye-iPhone yakho
2 Kutheni ndifuna ukwazi ukuba yeyiphi inkampani e-iPhone evela kuyo?
Fumanisa inkampani ye-iPhone yakho
Sebenzisa le fomu ilandelayo ukufumana umsebenzisi we-iPhone yakho:
Uya kufumana yonke idatha kwi-iPhone yakho kwi-imeyile enxulumene neakhawunti yakho ye-Paypal okanye i-imeyile oyibhalayo ukuba uhlawula ngekhadi letyala. Ngokwesiqhelo uyakufumana ulwazi ngaphakathi kwemizuzu emi-5 ukuya kweli-15, kodwa kwiimeko ezithile kunokubakho ukulibaziseka ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-6.
Umsebenzi: Movistar Spain
Mahala: Hayi / Ewe
Ngekhontrakthi esisigxina ehambelana nayo: Hayi / Ewe, kude kube ngoMeyi 16, 2015
Ukuvula i-iPhone yakho kufuneka wenze oku kulandelayo / ngekhe uvule i-iPhone yakho
Kananjalo ukuba unqwenela ungajonga ukuba ngaba eyakho I-iPhone itshixiwe yi-IMEI Ngokuyikhetha xa kusenziwa intlawulo, kuya kufuneka uhlawule kuphela i- $ 3 okanye i- $ 4 ngaphezulu.
Kutheni ndifuna ukwazi ukuba yeyiphi inkampani e-iPhone evela kuyo?
Kubalulekile kakhulu ukuba uyazi ukuba yeyiphi na inkampani odityaniswe kuyo, kwaye kukuba xa a I-iPhone ithintelwe kwinethiwekhi enyeSingayisebenzisa kuphela kwinkampani eyeyayo. Ngale ndlela, kuya kuba luxanduva ukufumana i-iPhone yesibini-ngesandla engadibananga nenkampani yefowuni esiyisebenzisayo ngoku, ukongeza, Inyani yokuba isixhobo simahla lixabiso elongeziweyo, kuba sinokutshintsha phakathi kweenkampani zeefowuni eziphathwayo ezisinika amaxabiso okhuphiswano, ngenxa yoko siyakugcina imali eninzi.
Kungenxa yako konke oku ukuba inkonzo yethu iya kukuvumela ukuba wazi ngokulula zonke idatha malunga ne-iPhone, kubandakanya nomsebenzisi yeyakhe. Ngale ndlela unokuthintela ukusilela okunokwenzeka okuvela kwinkampani yemfonomfono apho isixhobo sinxulunyaniswe khona. Sukulibazisa, kwaye uthathe ithuba lokunikezela.